Raspberry uye Vanilla Cheka Ice Cream - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Raspberry Vanilla Cheka Ice Cream
Kudya795 maminitsi10 vanhu210 makarori
Iyi yakasviba uye inonaka rasipibheri vanilla yakatemwa ice cream iri kuva ice cream yatinofarira zhizha rino.
ari ice cream yakagadzirirwa kumba zviri nyore kwazvo kuita neThermomix. Zvakare zveiyi vhezheni haudi firiji, saka hapasisina zvimwe zvikonzero zvekuzvibata mune yezhizha kurapwa.
Zvakare iyi ice cream inogadzirwa Pasina lactose kuitira kuti munhu wese agone kunakirwa nedizeti kana chikafu chinonaka uye chinozorodza.
Usapotsa chikamu "Unoda kuziva zvakawanda here?" kupi iwe uchaona mashoma mashoma kuitira kuti ice cream iyi yakatemerwa iwe.
1 Raspberry Vanilla Cheka Ice Cream
2 Unoda kuziva zvakawanda nezve iyi Vanilla Raspberry Cheka Ice Cream?
A ice cream yakatemwa izere nekuravira kwaunogona kushandira pamwe kana pasina cookie.
Nguva yekugadzirira: 13H
Nguva yakazara: 13H 15M
350 g yekirosose-isina kurova kirimu (mashoma 35% mg) inotonhora
250 g inotonhorera isina mukaka wakaderedzwa
Nezve rasipiberi dura:
265 g yekisiki cream
1 dash yemarangi
Nezve iyo vanilla dura:
300 g yekisiki cream
1 teaspoon (saizi yedessert) vanilla paste (ona recipe)
Tiine girazi uye shavishavi kuchitonhora zvakanyanya, tinowedzera kirimu nekuirova pasina nguva, kumhanya 4 kusvika yatanga kuumbwa. Iyo haifanire kuve yakanyatso kuunganidzwa, chete semi-yakaungana.
Isu tinoronga kumhanya 2 uye nemumuromo, uye nemuchina uchimhanya, zvishoma nezvishoma wedzera mukaka wakanyorovera kuti uite musanganiswa unotapira uye wakakura.
Iyi kirimu ichave hwaro hweyedu yakanyoroveswa ice cream uye isu tichaigovanisa muzvikamu zviviri: imwe yemakumi maviri nemazana maviri negumi nemashanu magiramu uye imwe yacho inosvika magiramu mazana matatu.
Isu tinobvisa anenge 265 g yekrimu, tichichengetera iro rasipiberi dura, uye tosiya anenge mazana matatu magiramu mugirazi.
Wedzera iyo vanilla paste uye sanganisa for 15 masekondi, kumhanya 2. Isu tinobvisa uye tinochengetera mufiriji.
Mugirazi rakachena tinoisa raspberries yakashambidzwa uye yakaoma, shuga uye muto weorenji. Tinopwanya panguva 10 masekondi, kumhanya 10. Isu tinodzikisa musanganiswa takananga kumachira uye chirongwa 5 maminetsi, 90º, kumhanya 2.
Pakupera kwenguva, isu tinopfuudza iyo coulis nepasefa yakanaka mesh kuti tibvise mhodzi dzese.
Rega itonhorere pasi. Unogona kuiisa mufiriji kwemaminetsi mashoma kuti ikurumidze kuita.
Pasina kusuka girazi, wedzera iyo 265 g yekrimu yatinenge tachengeta uye wedzera iyo yakasvinwa rasipiberi coulis. Isu tinosanganisa panguva Masekonzi mashanu, kumhanya 30.
Isu tinoongorora kuti musanganiswa une homogeneous pingi ruvara, zvikasadaro tinosanganisa kwemamwe masekondi.
Zvekuungana kweiyo ice cream:
Dururira kirimu mumakona akaenzana, ugozvigovera zvakanaka mukati meforoma kuitira kuti ienzane. Isu tinotsvedza pamusoro uye tinomisa kwemaminitsi makumi matatu.
Mushure menguva, tinoongorora kuti rasipibheri dura rakasimba. Izvo hazvifanirwe kunge zvakazara zvakakwana, zvakaringana kutsigira iyo vanilla kupfeka.
Isu tinonyatsodurura iyo vanilla dura yatakachengetera mufiriji. Isu tinogovera dura pamusoro penzvimbo yese kuitira kuti rienzane uye isu tinotsvedza pamusoro zvakare.
Tinotonhora kwemaawa mashoma kunyangwe zviri nani kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera.
Panguva yekushandira, tinocheka saizi yakafanana uye tinoshanda kana tisina bhisikiti.
Muchikamu "Unoda kuziva zvakawanda here?" Iwe unozotsvaga manomano akati wandei ekuti iyi ice cream ive yakakwana kwauri.
Unoda kuziva zvakawanda nezve iyi Vanilla Raspberry Cheka Ice Cream?
Kuti iyo yakatemwa ive yeunyanzvi sezvazvinogona, zviri nani kuti iwe ushandise square square tetrabrik mukaka kana muto. Iwo ndiwo anonyatsoenderana saizi remakuki kana zvitete zvavanogara vachishandira.
Ehezve, iwe uchafanirwa kuita yehunyanzvi kuitira kuti iyo tetrabrik ikwane zvakanyanya padhuze sezvinobvira. Chinhu chekutanga iwe chaunofanirwa kuita ndeche cheka rimwe remativi.
Iwe haufanire kubvisa iyo kamwene kubva kune tetrabrik asi uchafanirwa kubvisa mhando ye yomukati washer Uye edza kuvhara iro gomba
Pashure geza zvakanaka, kunyanya kana yakagadzirwa nejusi kuti ice cream isatore pane inonaka isinganzwisisike.
Chekupedzisira, iwe unongofanirwa kuisa chidimbu chebheka rekubheka iro rinofukidza hwese hwese hweforoma nyowani zvakanaka. Saka zvichave zvakawanda nyore kubvisa kubva muforoma patafura kuti ugone kuita kuti kucheka kuve kwakaenzana sezvinobvira.
Chimwe chezvakavanzika zveiyi yakatemwa ice cream ndiko kurongeka kwematanho anoita kunge akafanana asi zviri nani isa pasi rasipibheri kirimu nekuti iri gobvu uye inobata huremu zvirinani pane iyo vanilla layer. Izvi zvinodzivirira iyo yakatemwa kubva pakupunzika.
Kuti upe iro rasipiberi dhizaini rakanyanya kubata, iwe unogona kuwedzera madonhwe mashoma echikafu chekudya. Unogona kushandisa madhayi echisikigo senge beet muto unopa matauni akasimba uye haubvise kunonaka kwechando.
Izvo zvakakoshawo kuti, kana iyo ice cream yaungana, iwe uisiye mufiriji kwemaawa mashoma kuitira kuti iyo matanda anogara zvakanaka uye kuti kana uchicheka zviri nyore kwauri.
Uye kutaura nezvekucheka, yanhasi yekupedzisira hunyengeri ichaita kuti basa iri rive nyore kwauri. Kuita kuti zvive nyore kwauri, iwe unofanira kungoita pisa banga yauchazoshandisa. Zvirinani kuisa mvura inopisa mumudziyo uye sadza jira kwemaminetsi mashoma. Nenzira iyi inozotora tembiricha uye kana iwe ukaiisa pamusoro peayo ice cream inozoitema zvisingaite ... hongu, uchafanirwa kuichenesa pakati pekucheka kuitira kuti ive yakanaka uye isasvibise.
Handisi kuzotaura newe nezvekuchengeta ice cream iyi nekuti handifunge kuti ichapona kunyangwe svondo mufiriji. Iyo inonaka zvekuti ivo vachatora kubva pamaoko ako.
Mamwe mashoko - Lime uye ndimu ice cream
Tsvaga mamwe mabikirwo e: General, Lactose isingashiviriri, Anopfuura makore matatu, Desserts, Zhizha mabikirwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Thermorecetas » General » Raspberry Vanilla Cheka Ice Cream
Kiwi uye prawn saladi